Wanta haaraa Zimbaabweerraa: Mugaabeen 'waamicha aangoo dhiisuu didaa jiru' - BBC News Afaan Oromoo
Wanta haaraa Zimbaabweerraa: Mugaabeen 'waamicha aangoo dhiisuu didaa jiru'
Goodayyaa suuraa Obbo Mugaabee (lammatarra gara mirgaa) hidhaa mana keessatti, Kommaandarri Jeneeraalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa Zimbaabwee, ZDF, Konstaantiinoo Chiweengaa (mirga)
Preezidaantiin yeroo dheeraa Zimbaabwee Robart Mugaabeen, waamichi aangoo gadhiisuu baayyachaa haa dhufu malee, isaan garuu waamichaa kana didaa jiraachuun gabaafamaa jira.
Namni ganna 93 kun hidhaa mana keessatti kan oolfaman Roobii dabre, erga waraanni biyyattii biyyattii to'atee boodadha.
Ibsi bu'aan haasawa isaanii maal akka tahe aangawootaa fi ajajaa waraanaa irraa wanti jedhame hin jiru.
Haa tahu malee maddeen akka ibasanitti, hanga yoonaa aangoo gadhiisuuf cichaa jiru.
Dursaan mormituu Morgaan Shaangaaraay waan jedhan, ''Fedhii uummata biyyattii kanaa kabajuuf, Obbo Mugaabeen hatattamaan aangoo gadhiisuu qabu,'' jedhan.
Waraanni biyyattii biyyattii kan to'ate erga Mugaabeen Itti-aanaa isaanii Emarsan Mnaangaagwaa ari'an boodadha. Kunis Obbo Mugaabeen itti anaa isaanirraa haadha warraa isaanii Girees Mugaabee akka isheen paartii Zanu-PF akkasumas aangoo pireezadaantummaa dhaaltu barbaaduu isaanii mullisa.
Gaazexessaan BBC, Andriiw Haardiing Zimbaabweerraa waan jedhe, yoo Pireezidant Mugaabeen aangoo akka gadhiisan namni isaan amansiisu yoo jiraaate, gidduu galuumsa waraanaa biyyattii seera qabeessa taasisa jechuudha.
Daandiiwwan biyyattiirra nama Mugaabeen aangoorra akka turan barbaadan argachuun hedduu ulfaata. Haa tahu malee, akkaataa isaan itti aangoo itti gadhiisaniifi waliigaltee cee'umsaa gochuun yeroo fudhachuu danda'u.
Harareetti amma maaltu ta'aa jira?
Wanti ifa tahe hin jiru.
Suuraan Zimbaabwee Heraald irraa argame akka mullisutti, Obbo Mugaabeen ajajaa waraanaa kan ta'an Jen Konstaantiinoo Chiweengaa waliin, akkasumas ergamtoota lama Hawaasa Misoomaa Kibba Afrikaa (Sadc) irraa dhufan waliin Masaraa Harareetti argamutti walgahaa akka turan mullisa.
Kana malees qeesiin Romaan Kaatoliik, Abbaa Fidaliis Mukoonoorii jedhaman, Obbo Mugaabee waliin yeroo dheeraaf kan wal beekanis, araarsuuf isaan gidduu turan.
Image copyright AFP/Reuters/EPA
Goodayyaa suuraa Bitaarraa mirgatti: Robart Mugaabee, haadha warraa isaanii Girees Mugaabee, kan ari'aman Emarsan Mnaangaagwaa fi Jen Konstaantiinoo Chiweengaa
Maddeen dhiheenyaan dhimmicha hordofan waan jechaa jiran - Obbo Mugaabeen filannoo bara dhufu karoora keessa jiru duraan aangoo gadhiisuuf cichaa jiraachuu dubbatu. Obbo Mugaabeen erga bittaa warra adii ALA 1980tti darbatan booda, hanga yoonaa aangoorra jiru.
''Akka yaada kiyyaatti, yeroo ajjeesaa jira,'' jechuun maddi qondaaltota waraanaatti dhiheenya qabu ejensii oduu AFPtti himeera.
Akka maddeen dhiheenyaan dhimmicha hordofan jedhanitti, Obbo Mugaabeen aangoo dhiisanii bu'uun dura ofiifi maatii isaaniif eegumsa mirkaneeffachuu barbaadan.
Goodayyaa suuraa Obbo Mugaabeen Masaraa Harareetti angawoota haasoofsiisan
Lammiileen Zimbaabwee maal yaadu?
Aan Sooy, Zimbaabweerraa
Lammiileen baayyeen waraanni biyyattii to'annaa taasisee fi Mugaabees mana keessa hidhaa jala oolchuu isaanitti gammadan.
''Waraanni waan dansaa tolche,'' jedhe namni kitaaba gurguru tokko. ''Mootummaa ceehumsaa akka argannu taasisu.''
Bulchiinsi waggaa 37 Obbo Mugaabee dhumarra gahuusaa sirriitti amana.
Namoonni baayyeenis dheebuu jijiiramaa qabu- jijjiirama kamiyyuu taanaan.
'Haadha warraa tiyya, ijoollee tiyya al takkaa yaadeen imimmaan narra yaa'e'
Imala angafti gaazexaa Oromoo gadaa shanii oliif taasise